နှင်းတောင်မကျသေးတဲ့ Shizuoka စီရင်စုမှာ ထူးဆန်းတဲ့နှင်းတောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရ - JAPO Japanese News
ကြာ 29 Oct 2020, 18:12 ညနေ
လက်ရှိဂျပန်ရဲ့ရာသီဥတုက ဆောင်းဦးပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်ရဲ့အချို့နေရာတွေမှာ ရေခဲနေပါပြီး။ အခြေနေတွေကိုတင်ပြရရင် ယခု ၁၀ လပိုင်း ၂၈ ရက်နေ့နံနက်အစောပိုင်း၊ Iwate စီရင်စု Morioka မြို့မှာ ပထမဆုံးဆီးနှင်းတွေကိုပါ တွေ့နေရပါတယ်။
တောင်ပေါ်မှာသာမကဘဲ လွင်ပြင်ဒေသမှာပါ ０℃ အထိအေးနေပြီး၊ ဆီးနှင်းတွေကျတဲ့ရာသီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ ဆောင်းရာသီရဲ့အငွေ့အသက်တွေ ဆက်တိုက်ရောက်လာပါတယ်.
“ ပထမဆုံးမြူ” “ ပထမဆုံးဆီးနှင်း” “ ပထမဆုံးရေခဲ” စတဲ့ပထမဆုံးအရာတွေတွေ့လာရသလိုပဲ၊ အထူးသဖြင့် တောင်တန်းတစ်လျှောက်အဓိကအနေနဲ့ Kanto ရဲ့
(Tokyo, Chiba, Saitama, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Kanagawa) တွေမှာလည်းစပြီး အေးခဲလာဖို့မြင်နေရပါတယ်။
Gunma စီရင်စုရဲ့ Asama တောင်နဲ့ ၊ Yamanashi စီရင်စုရဲ့ Fuji တောင်ထိပ် မှာလည်းပထမဆုံးဆီးနှင်းတွေတွေ့နေရပြီး၊
Hokkaido နဲ့ Tohoku ရဲ့ (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima) လွင်ပြင်ဒေသတွေမှာလည်း “ ပထမဆုံးနှင်း” “ ပထမဆုံးရေခဲ” တွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာမှ Shizuoka စီရင်စုမှာ ဒီလိုထူးဆန်းတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ အမှန်က Shizuoka စီရင်စုမှာနှင်းလုံးဝကိုမကျသေးတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတဲ့နှင်းပုံကြီးရဲ့အရှည်က ၁ ကီလိုမီတာလောက်ရှိတယ်။ ဒါဆို ဒါဘာကြီးလဲ?
၂၈ ရက်နေ့က၊ ဒီထူးဆန်းတဲ့နှင်းတောင်ရဲ့သရုပ်မှန်ကိုသိဖို့ မိုးလေဝဿခန့်မှန်းသူတစ်ဦးကသွားပြီး သတင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီထူးဆန်းတဲ့နှင်းတောင်ကြီးက တကယ်တော့ Shizuoka စီရင်စုရဲ့ “ 富士山2合目” မှာရှိတဲ့ နှင်းလျှောစီးတဲ့နေရာ “ Fujiyama Snow Resort Yeti” ပါတဲ့။
“ Fujiyama Snow Resort Yeti” မှာတော့ ၂၄ နာရီကြာခံတဲ့နှင်းတုတွေကို ၁ ရက် 550 တန်နှုန်းနဲ့ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
ဒီနှင်းလျှောစီးတဲ့နေရာကိုဖွင့်တာ ယခုနှစ်ဆို၂၂ နှစ်တိုင်ရှိပါပြီး။ ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ နှင်းလျှောစီးတဲ့နေရာကိုအရင်ကနဲ့မတူဘဲ အစောဆုံးဖွင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Shizuoka မှာနှင်းမကျသေးဘဲ ဒီနှင်းတောင်ကြီးကိုတွေ့နေရတာပဲပေါ့..
နောက်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ ၁၀ လပိုင်း ၃၀ ရက်နေ့မှာပဲ ဒီနှင်းလျှောစီးတဲ့နေရာကို ဂျပန့်အစောဆုံးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဥ်ထားတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ယနေ့ ၂၉ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)အတွင်း ဒီနှင်းတောင်ကိုညှိနေကြပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နှင်းလျှောစီးတဲ့နေရာဖွင့်ပွဲနဲ့အလိုက်ပဲ တိုကျိုမှာလည်း ပိုပြီးအေးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
၃၀ ရက်နေ့ တိုကျိုအတွက် ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့ 19℃ ဖြစ်ပြီး ၁၁ လပိုင်းအစောပိုင်းအထိ ဆက်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားသလိုပဲ၊ အဲ့ဒီထက်လည်းပိုကျသွားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ အားလုံးပဲနွေးနွေးထွေးထွေးနေကြပါနော်…
(၂၉) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၃၅၉၉ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၅၈ ဦးရှိ
(၁၁) ရက်နေ့၊ ကူးစက်မှုအသစ် တိုကျို ၃၁၇ ဦး၊ ဟိုကိုင်းဒိုး ၁၉၇ ဦး
(၂၆) ရက်နေ့ တိုကျိုမြို့ကူးစက်လူနာအသစ် ၉၄၉ ဦးရှိ၊ အရေးကြီးလူနာ ၈၁ ဦးရှိ